Etazonia any Syria: Inona no antenaina amin’ny fitondrana vaovao? · Global Voices teny Malagasy
Tsy hidi-kizo any Siia ny fitondrana vaovao ao Etazonia
Voadika ny 15 Desambra 2020 2:16 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Español, Italiano, English
Tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Atmeh any Aleppo, Siria. Saripikan'i IHH Humanitarian Relief Foundation, CC BY-NC-ND 2.0.
Rehefa hifarana ny efatra taona fe-potoana nitondran’ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump, hidika inona ho an'ny ady mitarazoka ao Syria sy ireo vahoaka tratry ny fahirano ao aminy ilay fitantanan-draharaha vaovao ? Na dia nanome baiko tamin'ny fomba ofisialy aza i Trump mba hialàn'ny tafika amerikana any Syria tao anatin'ny efatra taona lasa, dia mbola mijanona ho olana lehibe ho an'ny fitantanan'i Etazonia ny ady an-trano misy , porofon'izany ireo iraka fanoherana ny asa fampihorohoroana tato anatin'ny volana vitsivitsy farany.
Azo inoana fa ny filoha amerikana voafidy, Joe Biden, dia hitondra fijery vaovao amin'ny fijoroan'i Etazonia manolonana ilay fifandonana, fa tsy hanery ny fisian'ny fiovana lehibe ao an-toerana anefa izany.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Defense One tamin'ny volana lasa teo, Jim Jeffrey, mpanolotsaina amerikana teo aloha momba ny fiarovana ary misahana an'i Siria, dia nandiso ny mety hisian'ny “fisintahana tanteraky ny Amerikana” any Siria, na teo aza ny baikon'i Trump, tamin'ny filazàna fa: ” Mbola nanao ny lalaon'ny sifotra isika mba tsy hahitàn'ireo mpitondra antsika mazava ny isan'ireo miaramila nalefantsika tany ” Raha ny filazan'i Jeffrey, tsy mbola nihena mihitsy teo ambany fitantanan'i Trump ny asan'ny Amerikanina tany Siria ary mbola manan-danja ihany na eo aza ireo antso vao haingana mibaiko ny fanenana ny isan'ny tafika any an-toerana.
Raha ny marina ,nanitatra ny sehatra fanaovana hetsika ireo tafika Amerikana, izay matetika dia manatanteraka ny iraka fanoherana ny asa fampihorohorona avy any amin'ireo toby irakiàna miaraka amin'ny Tafika Demokratika Siriana (SDF) tohanan'i Washington. Tamin'ny fomba ofisialy no naneken'ny ”Pentagon” fa miaramila amerikana miisa 200 ihany no tokony ho any an-toerana. Na teo aza izany , araka ny tatitra nataon'ny New York Times tamin'ny Oktobra 2019 , dia efa tafakatra 900 ny miaramila amerikana ao Siria fotsiny amin'izao fotoana izao. Anatin'ireo politika nampiharina tato ho ato, natao hiantohana ny fanarahamaso ny faritany sy hiadiana amin'ny asa fampihorohorona, dia azo hinoana fa hohamafisina ny tafik'i Etazonia ao an-toerana.
Ohatra iray amin'izany asa izany ny famotehana ny tobin'ny ISIS tamin'ny volana lasa teo tany an'efitr'i Badiyah tamin'ny alàlan'ny andiana fiaramanidina notarihan'i Etazonia avy amin'ny fiaraha-mitantana iraisam-pirenena, raha nisy fiara miaramila amerikana fanampiny nalefa tany atsinanan'i Siria. Nandritra ny herinandro voalohan'ny volana Novambra, hetsika 14 no natao hamelezana ireo vondrona mpampihorohoro ao amin'ny faritra, raha ny tatitra vao haingana avy amin'ny ” Operation Inherent Resolve ” kosa maneho ny filàna fihazonana ny fahatongavana tsy tapaka eny an-tsahan'ady mba hiadiana amin'ny zavatra nofaritan'izy ireo ho paosy mavitrika an'ny ISIS eny an-kianja. Vao tsy ela akory izay no nisy tatitra nilaza ny ady lehibe nisy teo amin'ny miaramilan'ny ISIS sy ireo mpiady mpomba ny fitondràna tao akaikin'i Deir ez Zor , tanàna lehibe indrindra any atsinanan'i Siria.
Angamba ny fanambaràna tamin'ny volana lasa teo nataon'ilay Senatera amerikana Lindsey Graham sy ny sekreteram-panjakana Mike Pompeo momba ny fifanarahana solika eo amin'ny SDF sy ny orinasan-tsolika amerikana no hanome tohana betsaka kokoa amin'ny fanaparitahana ny amerikana any Siria. Ankoatry ny maha-lohalaharana ny asa fanoherana ny fandrahonana ataon’ny mpampihorohoro amin'ny tombontsoany ao amin'ny faritra sy ireo mpiara-dia aminy, ny maha-zava-dehibe ny ady any Siria ho an'ny fitantanan'i Etazonia dia avy amin'ny hetahetan'i Washington hisakana ny fihitaran'ny faritra rosiana ao amin'ny faritra, satria mijanona ho mpanohana lehibe ny fitondrana Siriana i Maosko. Noho izany dia tohanan'i Washington hatrany ny tafika kiorda amin'ny fifandonana mivantana misy fandraisana anjaran'ireo Rosiana mpikarama an'ady.
Nandritra ny fampielezan-kevitra, mbola tsy natolotr'i Biden ny politikany ho avy momba ny ao Afovoany Atsinanana, noho izany dia mbola manjavozavo ny politikany momba ny tafika ao Siria. Saingy tamin'ny volana lasa, nasongadin'ny filoham-pirenena amerikana manaraka fa hitazona miaramila amerikana hatramin'ny 2.000 any amin'ireo faritra mikorontana ao Afovoany Atsinanana izy, mifantoka indrindra amin'ireoy “hery manokana” ary ireo hery ireo “dia tsy tokony hitsabaka amin'ny resaka politikan’ny firenena iasan'izy ireo “. Amin'ny ankapobeny, nilaza i Joe Biden fa handrafitra politika ivelany mifototra amin'ny “tombontsoan’ny amerikana .”
Toa nampifanaraka ny azy tamin'ny fitantanan'i Trump i Biden raha ny amin'ny famaizana atao an'i Siria. Tamin'ny resadresaka sasany nataony talohan'ny fampielezankevitra dia nilaza i Biden fa tsy mikasa ny hanitsy na hanafoana ny ”Caesar Act ” izy, fehezana famaizana atao an'i Siria izay nankatoavin'ny kongresy amerikana, ary ” hitazona izay sazy amerikana atao amin'ny fitondrana Siriana sy ireo orinasa voakasika amin'izany”. Na eo aza izany, navoitran’ ireo mpanolotsaina an'i Biden ny mety hisian'ny zava-maningana noho ny amin'ny maha-olombelona mba hanolorana fanampiana ho an'ireo “Siriana sahirana”.
Eo amin'ny zon'olombelona no hita taratra ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fitantanan'i Trump sy Biden momba an'i Siria. I Kamala Harris, filoha lefitra amerikana voafidy, dia nitsangana nanohitra ny fanapahankevitr'i Trump noraisiny tamin'ny taona 2019 hiala ao Siria, taorian'ny ”lohataonan'ny fandriampahalemana” tany Tiorkia. I Anthony Blinken, ilay ho sekreteram-panjakana ao amin'ny fitantanan'i Biden, dia manaiky izany fomba fijery izany ihany koa. Tao amin'ny lahatsoratra iray ho an'ny ”Brooking Institute” tamin'ny taona lasa, nofaritany tao ny politikan'ny tafika amerikana any Siria ho “lesoka tamin'ny fanaovana kely loatra”. Nampitandrina izy fa: “Raha mitohy ny fisintahana ao Siria nambaran'i Trump dia mety hahita ny fiverenan'ny Fanjakana Islamika ihany koa isika.”
Tamin'ny antsafa iray nifanaovany tamin'ny CBS tamin'ny volana Mey lasa teo, nilaza i Blinken, sekretera mpanampy ny sekreteram-panjakana sady mpanolotsaina lefitra nasionaly fony fitondran'i Obama, fa ny fitondran'Andriamatoa Obama izay niasany dia “namela” ny Siriana ary nanomboka teo no niharatsy ny politika amerikana manoloana ny ady , indrindra fa nandao ireo mpiara-dia Kiorda i Washington. Araka ny fandikana an-tsoratra ny tafatafa dia nilaza izy fa: ” Tsy nahavita nanakana ny famoizana ain'olona mahatsiravina izahay .”Tsy nahavita nanakana ny famindran-toerana olona be loatra tao anatin'i Siria izahay ary, mazava ho azy, ny ny nankany ivelany ho toy ny mpitsoa-ponenana” , ary nanampy izy fa ny fitondrana Biden dia tokony hiezaka indray hampitodika ny masony hijery akaiky kokoa ny lafiny maha-olona.
Tokony hanome lanja betsaka kokoa ny zava-misy any amin'ireo toerana fehezin'ny Kiorda ny fitondrana vaovao ao Etazonia, raha oharina amin'ny politika “avelao hanao ny ataony” nampiharin'i Trump tamin'ireo miaramila tiorka ao amin'io faritra io. Nanohana ny fidirana an-tsehatra amerikana any Siria kosa i Harris , indrindra taorian'ny fanafihana natao tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana simika nataon'ny fitondrana Siriana tamin'ny 2017.
Nanolotra hevitra aza i Robert Ford, masoivohon'i Etazonia teo aloha tany Siria, fa tokony hanome ny tohana ilaina ho an'ny vondrom-piarahamonina kiorda ny fitondrana Biden ho amin'ny “faneken'izao tontolo izao ny fanjakana kiorda “. Voa nanao fanambarana tamin’ny VOA i Sinam Mohammad, solontena politikan'ny Syrian Democratic Forces (SDF) any Etazonia.
Antenain'ny SDF fa hanome ny fanohanana ara-politika bebe kokoa ho azy ireo ny fitantanan'i Biden mba ho hahatafiditra azy ireo ho ao anatin'ireo dinika hamaritana ny hoaviny sy ny an'i Siria iray manontolo.
Araka izany, ny fomba fiasan'i Biden ao anatin'ny ady Siriana dia tsy maintsy hifandona amin'ny an'i Torkia, izay mpisehatra iray lehibe amin'ny ady any Siria. Na dia mpiara-dia amin'ny SDF aza ny fitondran'i Biden, ny politikan'i Ankara dia mifantoka betsaka amin'ny fanoherana ity fifanarahana Kiorda-Arabo any avaratr'i Siria ity izay heveriny ho “vondrona mpampihorohoro”. Mifanohitra amin'izany ny tamin'ny taona lasa, niantso ny Kiorda ho “fahavalo voajanahary” i Trump. Tamin’ny Novambra, nanamafy tamin'ny antsafa nataony ho an'ny Defense One i Jim Jeffrey, mpanolotsaina amerikana teo aloha momba ny fiarovana ary misahana an'i Siria, fa tsy nisy na iray aza tao Washington nanome antoka ny Kiorda hamely an'i Tiorkia, ka mametra izany fiarahamiasa izany.
Taorian'ny naha-voafidy an'i Biden, misy ireo mpivaofy hevitra isan-karazany naminavina ny fifandraisana mananosarotra misy amin”i Etazonia sy i Tiorkia noho izay nolazain'izy ireo ho fanohanan'i Etazonia amin'ny fametrahana faritany Kiorda ao amin'ny faritra.
Ao anatin'ny tontolon'ny maha-olombelona dia mikasa ny hampihatra ny politika amerikana amin'izao fotoana izao momba ireo mpitsoa-ponenana ihany koa ny fitondrana Biden. Na dia nampidinin'ny mpitantana teo aloha ho 15.000 aza ny isan'ny mpitsoa-ponenana ho an'ny taom-piasana 2021, izay tarehimarika ambany indrindra hatrizay, dia nianiana i Biden fa ” hapetraka ho 125.000 isantaona ny fetra ambony handraisana mpitsoa-ponenana iraisampirenena, ary hitady izay hampiakarana izany foana izy rehefa mandeha eny ny fotoana.’’